अन्तिम खेल हेर्नको लागि ९ वटै वडाका युवा तथा बालबालिकाहरु खेल हेर्न जनसागर झैं ओर्लेका थिए ।
प्रकाशित मिति : ११ जेठ, २०७६ , ०७:२१:०० बजे
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । धनुषाको शहिदनगरमा नगरस्तरीय खेलाडी छनौट प्रक्रियामा २५ जना दिग्गज खेलाडी छनौट गरिएको छ ।
शहिदनगर नगरपालिकाको वडा नं. ५ पचहर्वामा सम्पन्न भएको फुटबल टुर्नामेन्टबाट २५ जना खेलाडी छनौट गरिएको हो । नगरपालिकाको ९ वटै वडाबाट उत्कृष्ट २५ जनालाई छनौट गरिएको नगर प्रमुख उदय कुमार बरबरियाले बताए । उपमेयर कप अन्तर्गत सबै वडाबाट टिमहरुले सहभागीता जनाएका थिए ।
प्रतियोगिताको अन्तिम खेलमा भिडदै नगरपालिकाको वडा नंं ६ हठ्ठीपुर हडवारा र वडा नं. ८ बिसरभोराबीचको खेलमा हडवारा टिम विजयी भएको थियो । दुवै टिमले अन्तिम समयसम्म १ १ गोल गरेपछि म्याच ड्रो भएको थियो भने अन्त्यमा फुटबलको नियम अनुसार पेनाल्टी प्रणालीबाट फैसला गरिएको थियो । सो क्रममा हडवारा टिमले ४ गोल गरेका थिए भने विसरभोरा टिमले २ गोल गरेपछि ४ २ अन्तरगोलले हडबारा टिम विजयी हाँसिल गरेको थियो ।
प्रदेशस्तरीय खेलकूदमा जुध्न २५ दिग्गज खेलाडी छनौट गर्दैछौं : मेयर बरबरिया
खेलको क्रममा मैन अफ दी सिरिज हडबाराका बेष्ट ऐलेभेनका बरुण यादवलाई प्रदान गरिएको छ भने म्यान अफ दी म्याच सुधिर यादवलाई घोषित गरिएको थियो । पेनाल्टि किक प्रणालीमा हडबाराबाट गोल किपर विश्वजीत पासवानले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए ।
शहिदनगरको सर्वागिंन विकासको लागि खेलकूद समेत महत्वपूर्ण अंग रहेको भन्दै मेयर बरबरियाले दोस्रोे नगर स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता अन्तर्गत उप मेयर कप प्रतियोगिताको आयोजना गरेका थिए । खेलकूदप्रति रुची राख्ने नगरका युवाहरुलाई प्रदेश स्तरीय खेलकूद सिरिजमा जुधाउनको लागि खेलाडी तयार गर्ने उदेश्यले उपमेयर कप प्रतियोगिता गराईएको उनले थपे ।
समापन खेलमा नगरकी उपमेयर शिला देवी कापर सहित जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष सुरेश शर्मा, कोच प्रकाश आर्याल, शसस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा वेश यदुकूहाका प्रहरी नीरिक्षक किशमान तामाँग, ईलाका प्रहरी कार्यालय यदुकुहाका प्रहरी नीरिक्षक भिम बहादुर खडका, खेलप्रेमी, स्थानीय नागरिक, युवाहरुको मोटो उपस्थिति रहेको थियो ।
सो क्रममा खेलाडीहरुलाई सम्मान सहित ट्रफी र नगर पुरस्कार समेत मेयर बरबरियाले प्रदान गरेका थिए । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्द कुमार झाले समेत खेलाडीहरुलाई मेडल लगाएर सम्मान गरेका थिए । जीत हाँसिल गर्ने टीमलाई बधाई दिँदै नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । सो क्रममा उपस्थित अन्य अतिथिहरुलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।